Fardaha Appaloosa iyo jaakadooda khaaska ah ee la arko | Fardaha Noti
Maqaalka maanta, waxaan ka hadli doonnaa noocyadan loo yaqaan 'equine' oo leh dabeecad gaar ah oo gaar ah: Faraska Appaloosa. Shaki la'aan waad igu raaci doontaa inay tahay a tartanka u qalma inuu ka mid noqdo ugu qurxoon egines.
Daboolka mootada ee Appaloosa waxaa lagu arki karaa sawir gacmeedka Faransiiska 20.000 sano kahor. Shiinaha, xilliyadii Ming DynastyDhogortaani waxay ahayd mid aad u qaali ah oo la sawiray sawirro isku mid ah oo matalaya sinnayaashaas. In badan kadib, qarnigii XNUMXaad, inta lagu gudajiray qabsashadii Dunida Cusub, halkaas oo dhogorta dhibcaha leh laga dhex heli karo fardaha Isbaanishka.
Ma rabtaa inaad wax yar ka ogaato iyaga?
Sida tiro badan oo ka mid ah noocyada Mareykanka, asalkiisu wuxuu ka soo bilaabmay fardihii ay guuleystayaashii Isbaanishku u keeneen Ameerika. Qarniyo badan ka hor, farduhu way ka jiri jireen Ameerika, laakiin waxay ku dhammaadeen inay baaba'aan in ka badan 11.000 milyan oo sano ka hor.
Kadib dib-u-soo-kicinta sinnaanta Mareykanka, kuwan way fidayeen labadaba fardo-dhaqameed iyo faras weyn oo qaaradda oo dhan ah. Kuwani waa muhiimad gaar ah markay ka hadlayaan nooca Appaloosa.
Fardaha maroonku waa kuwoodii hadhay, Sababtoo ah way baxsadeen ama milkiilayaashoodii ayaa sii daayay xilligii jiilaalka si looga ilaaliyo inay hayaan ama sababo kale oo kala duwan awgood. Kuwani waxay u dhigmaan ku habboon nolosha duurjoogta ah waxayna ka samaysteen xoolo dhan Ameerika.
Appaloosa oo leh lakab dhibic ah
Waxay ahayd xilligan xorriyadda laga qaatay qaar ka mid ah fardaha dhibcaha, markii Nez Perce Indians ayaa ogaatay taas xayawaankaas dhogorta xiisaha leh, waxaa loo habeeyay nooca xoolaha ee ay uga baahan yihiin ugaarsigooda iyo howlaha dagaal. Waxay arkeen sharafnimada isbarbaryaacyadan, kala duwanaanshahooda iyo xooggooda, taas oo ay ahayd inay ku darsadaan astaantooda astaamaha.
In ka badan 200 sano, Nez Perce xulay fardahaas astaamaha wanaagsan lahaa waxayna isticmaaleen kuwii ugu fiicnaa ee matalayay tartankaas oo ay maanka ku hayeen. Si yar oo yar Sifooyinka maanta lagu kala saaro fardaha Appaloosa ayaa la aasaasay.
2 Dharka fardaha Appaloosa
3 In yar oo ka mid ah taariikhdeeda
Nez Perce Indians waxay fardaha u kiciyeen ugaarsi iyo dagaal ay la galaan qabaa'ilka deriska ah, markaa waxay ahayd a nooc adag oo leh iska caabin weyn inta lagu jiro maalmaha iyada oo aan si dhib leh wax loo cabin loona cunin. Sifooyinkaasi waxay maanta ka dhigeen fardo si aad ah loogu qiimeeyo tijaabooyinka xoogga iyo adkeysiga, weerarada, tan, iwm.
Iyada oo dhererkeedu u dhexeeyo 145 cm ilaa 160 cm, Appaloosa ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah tartamada ugu dhaqsaha badan maanta jira.
Waxay soo bandhigaan a wareegsan oo aad u murqaha muruqsan, ciddiyaha addimo aad u xoog badan leh muuqaal lafo. Badanaa kuma laha timo aad u tiro badan dabo iyo manjooyinkooda. Dhagahoodu aad ayey u yar yihiin indhahooduna waa weyn yihiin.
Laba faahfaahin oo tilmaamaya jilitaankan, marka lagu daro maqaarkiisa iyo jaakaddiisa kuwaas oo aan kaga hadli doonno qeybta xigta, waa: dhinac dhinac ah taas cudurka sclera (aagga cad ee isha aadanaha) waa cad yahay waana ka muuqdaa marka loo eego noocyada kale fardaha taas oo lagu arki karo oo keliya haddii xayawaanku u ekaado kor, hoos ama mid ka mid ah dhinacyada. Dhanka kalena, koofiyadaha taagan leh karbaash fudud iyo mugdi ah.
Sida dabeecadda, waxaan hor joognaa qaar ka mid ah sinnaanta geesi ah, firfircoon oo firfircoon, tartan in wuxuu ku fiicanyahay xawaarihiisa iyo kacdoonkiisa.
Dharka fardaha Appaloosa
Koodhka dhibcaha leh ee fardaha Appaloosa shaki kuma jiro iyaga muuqaalka ugu caansan iyo midka gaarka ah. Laakiin waa muhiim in taa la ogaado fardaha dhibcaha leh oo dhan kama mid ahaan isirkan.
Appaloosa waxay leedahay maqaar casaan ah oo leh meelo mugdi ah oo isku dhex jira, isaga oo u siiya muuqaal muuqaal ah maqaar khafiif ah, wax aan kaliya ahayn wuxuu ku dhacaa jirka laakiin sidoo kale xuubka, indhaha iyo hareeraha xubinta taranka. Tan waa in lagu daraa astaamaha aan soo sheegnay ee koofiyadaha xargaha iyo sclera cad sida dadka.
Hadda aan ka hadalno noocyada kala duwan ee lakabyada in aan ka heli karno gudahan:
Dhibic: Saldhig iftiin leh, taxane ah dhibco midab madow leh ayaa loo qaybiyaa.
Snowflake: Midabka salka waa mugdi halka nabarrada salka ku yaal ay cadaan yihiin loona qaybiyay jirka oo dhan.
Lagu Murmay: Koodhkan, qaybta hore waxay leedahay saldhig mugdi ah oo leh dhibco cad iyo midabbo kale, halka qaybta dambe ee faraska ay leedahay saldhig fudud iyo baro madow. Xubnaha addinku badanaa waa madow yihiin.
Shabeel: On a light dhibco oval asalka ah ayaa loo qaybiyaa dhammaan jaakada.
Iftiinka iftiinka: Burka iyo kilyaha aaggu waa iftiin ku yaal asal madow. Raga sidoo kale waa madow.
Dhexda lagu arkay: Kala duwanaanshahan ugu dambeeya ayaa loo maleynayaa waxay noqon kartaa asalka tartanka; Waxay ka kooban tahay in kuuskuusku iyo kilyaha xayawaanku ay yihiin midab khafiif ah oo ay leeyihiin baro madow.
Sida caadiga ah, midabada jaakadaha labka ayaa aad u muuqda marka loo eego kuwa dhadig.
In yar oo ka mid ah taariikhdeeda
Magaca "Appaloosa" wuxuu ka yimid magaca webi ka tallaabay dhulalka Nez Perce: Webiga Palousse.
Noocani oo uu soo saaray Nez Perce wuxuu ahaa mid xoogan oo adag, taas Sannadkii 1876-kii ayaa dawladda Waqooyiga Ameerika waxay amar ku bixisay in dhammaan fardaha Appaloosa la dabar jaro, iyadoo la fahamsan yahay inay yihiin hubka ugu wanaagsan ee dagaal ee qabiilkan.
Nasiib wanaag amarkan ayaan ku guuleysan iyo qalcad yar oo Appaloosa u dhiganta ayaa badbaaday.
Sanadka 1938 waa muhiim for this nooc ka dibna Naadiga Faraska ee Appaloosa ayaa la aasaasay (APHC) iyo soo kabashadii fardahan qaaliga ah ayaa bilaabmay. Maanta Appaloosa looma tixgelin karo "saafi" iyada oo aan la helin shahaadada ku habboon ee APHC.
Ururkani wuxuu aasaasay barnaamij loogu talagalay soo kabashada iyo hagaajinta noocyada Appaloosa. Tijaabooyin yar oo badbaaday ayaa lagu qasay jinsiyadaha rubuc mayl ama carabi (kaas oo ka soo jeeda tartanka AraAppaloosa) ujeedkan.
Hadda tirada Appaloosas diiwaangashan ayaa ka badan 600.000, taas oo ka dhigaysa nooca saddexaad ee ugu caansan ee dunida.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Fardaha loo yaqaan 'Appaloosa' iyo jaakaddooda kala soocda leh